Golaha baarlamaanka dowlada Puntland oo u yeeray Madaxweyne ku-xigeenka Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGolaha baarlamaanka dowlada Puntland oo u yeeray Madaxweyne ku-xigeenka Puntland
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Cabdixakiim Cabdulaahi Cumar Camay. Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka dowlada Puntland ayaa maanta u yeeray Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, sida uu Puntland Mirror u xaqiijiyay xubin kamid ah baarlamaanka.
Xildhibaanada baarlaamka Puntland oo ku guda jira kala-fadhigooda 37-aad ayaa maanta fadhigooda diirada ku saaray dagaalka kasoo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolada Sanaag iyo Hayland.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Cabdixakiim Cabdulaahi Cumar Camay ayaa la filayaa inuu baarlamaanka hortago maalinta berito ah si ay su’aalo uga weydiiyaan xaaladaha soo kordhay.
Xubin kamid ah baarlamaanka ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in baarlmaanku ay rabeen in ay u yeeraan Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, balse ay ugu cudur-daareen shaqada culus oo uu ka wado gobolka Mudug.
Dagaal u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa maanta oo Isniin ah ka dhacay deegaanka Booda-cade oo qiyaastii 30km u jira magaalada Dhahar ee gobolka Hayland. Wali dowlada Puntland si rasmiya ugama aysan hadlin dagaalkaas.